तीज आयो, यो गीत गाउनुस् र सिक्नुस् गीतबाटै ह्रस्व र दीर्घ – Pahilo Page
तीज आयो, यो गीत गाउनुस् र सिक्नुस् गीतबाटै ह्रस्व र दीर्घ
२० भाद्र २०७५, बुधबार १४:२६ 782 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २० भदौ । सबैलाई बोझिलो लाग्ने तर नभएर नहुने ! प्रायः नेपालीहरुको आफ्नै मातृभाषाको लेखनचाहिँ अशुद्ध हुन्छ ।
तपाईं पनि त्यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ ? हो भने अब चिन्ता नलिनुस् । तीजको मौसम छ, तीज गीतको भाकामा एउटा अत्यन्तै ज्ञानवद्र्धक गीत आएको छ । त्यही गीत बजाउनुस्, मज्जाले नाच्नुस् र नाचसँगै सजिलै पारामा ह्रस्व तथा दीर्घ कसरी लेख्ने भनेर पनि सिक्नुस् ।
नेपाली व्याकरणमा ह्रस्व र दीर्घका नियमको एकदमै महत्व छ । महत्व भएर के गर्नु ? अधिकांश मान्छेहरु ह्रस्व र दीर्घमा झुक्किने गर्छन् । यहींनेर “नेपाली व्याकरण” बोलको गीत आएको छ । यो धेरैका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने मानिएको छ र सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल पनि बन्दै गएको छ ।
‘नेपाली व्याकरण’ शीर्षकको यो गीत नेपाली भाषाका शिक्षक विमल घिमिरेले तयार पारेका हुन् । एआइए स्कूल शंखमुलका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका घिमिरेको परिकल्पना र शब्द, राजकुमार घिमिरेको लय अनि शारदा पराजुलीको आवाजमा तयार गीतमा ह्रस्व दीर्घका नियमलाई लयबद्ध ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकाहरुलाई मात्र होइन दैनन्दिन लेखापढी गर्नेहरुलाई पनि यो उपयोगी छ । उपयोगी यो गीतलाई तीजको भाकामा तयार गरिएको छ । भिडियोको छायांकन स्कुल परिसरमै गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् र सिक्नुहोस् ह्रस्व अनि दीर्घ
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा गोरखा ग्रुपको चौथो विद्यालय, भवन शिलान्यास
यस वर्षको दशैं २०७७ मा घटस्थापनाको शुभसाइत (भिडियोसहित हेर्नुहोस्)
कोरोनाले रोकिएला त एसइई परीक्षा ?
तुलसीपुर उपमहानगरमा १३ विद्यालयलाई स्वीकृति
दाङमा प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमको पुस्तक वितरण शुरु